खानेपानी अध्यक्ष भएपछि रामप्रसादले यसरी ठडाए करोडौकाे महल, मेयर द्धारिकलालले गरे खुलासा -
२४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १८:४८ 638 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ – खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाईमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकलाल चौधरीले हातपात गरेको चर्चा अहिले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय संचारमाध्यमा महत्वका साथ स्थान पाइरहेको छ। मेयर चौधरीले नै उनी माथी गम्भीर आरोप लगाएपछि आम सर्वसाधराण नगरबासीको मनमा पनि साचो कुरा जन्नको लागि प्रश्न उठ्न थालेको छ।हातपातसँगै मेयर चौधरीले खानेपानी भित्रको भ्रष्टाचारको विषय किटान गरेर चौलागाईको आर्थिक हैसियतमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
कस्तो थियो रामप्रसादको आर्थिक विगत ? उनसँग नजिक भएका, उनलाई जान्ने जानकारहरु यसो भन्छन् । रामप्रसाद चौलागाइको आर्थिक अवस्था नाजुक थियाे । उनी सामान्य किसान परिवारका छोरा हुन । इटहरीको जनता क्याम्पस छेउमा घर भएका उनको परिवारले खेतीपाती गथ्र्यो । पछि उनले खेती बाहेक काठ मिल खोलेर व्यापार सुरु गरे ।आर्थिक अवस्थ कमजोर भएकाले जनता क्याम्पस इटहरीको सञ्चालक समिती सदस्य भएको बेला सेट्टिङ मिलाएर उनले श्रीमतीलाई जागिरमा लगाए । क्याम्पसको पुस्तकालयमा जागिर खुवाउन उनी सफल भए ।
काठमिल सञ्चालन गर्दा टेन्डर अरुलाई भर्नै नदिएर, पावर लगाएर आफैले ठुला ठुला टेण्डर पारेर काम गरे । त्यो बेला उनको आर्थिक हैसियत थोरै सुद्रिएको जानकारहरु बताउँछन् । तर जब उनी इटहरीको खानेपानीमा अध्यक्ष भए त्यस पछि उनको प्रगती दिनको दुई गुना रातको चौगुना भएको उनलाई नजिकबाट चिन्ने जो कोही बताउँछन् । उनी सँग अकुत सम्पती छ ।
समय क्रमसँगै उनले कराेडाैँकाे सम्पतिसमेत जाेड्न सफल भए। याे कसरी सम्भव भयाे भने विभिन्न सयममा सरकारी सम्पतिमा अनियमितता गरेर नै हाे।
साेही क्रममा मेयरले ठाउँ नै तोकेर उनले भष्ट्राचार गरेको आरोप लगाईएको छ । हिजोको जस्तै अर्कै पार्टीले हैन उनकै पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिले त्यो आरोप लगाएका छन् । उनकै पार्टीका उम्मेदवार भएर उनैले भोट हालेर मेयर भएका द्धारिकलाल चौधरीले नै खानेपानीको पाइप विच्याउदा,पाइप खरिद गर्दा, ट्यांकी निर्माण गर्दा रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाए । मेयरले आरोप मात्रै लगाएनन् बरु सार्वजनिक रुपमा भ्रष्टाचारीलाई कुटेँ भने सार्वजनिक नै गरे ।
आखिर के साँच्चै रामप्रसाद चौलागाई भ्रष्टाचारी हुन ? कि त्यो आरोप मात्रै हो ? उनको आर्थिक हैसियत विगतमा कस्तो थियो ? १३ बर्ष खानेपानी संस्थाको अध्यक्ष भएकै कारणले उनी हालको आर्थिक हैसियतमा पुगेका हुन ? वा उनको अरु कुनै स्रोत छ ? जो अरुलाई थाहा छैन ? यी अनुत्तरित प्रश्नहरुले आम नगरबासीको मन उकुसमुकुतले भरिएको छ ।